Danjiraha Kenya u fadhiya Somalia oo daaha ka rogay qorshooyin muran badan ka dhex abuuray Kenya iyo Somalia | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Danjiraha Kenya u fadhiya Somalia oo daaha ka rogay qorshooyin muran badan...
Danjiraha Kenya u fadhiya Somalia oo daaha ka rogay qorshooyin muran badan ka dhex abuuray Kenya iyo Somalia
Safiirka Kenya uga wakiilka ah dalka Somalia, Ambassador Yvonne Khamati ayaa sheegtay inaysan marnaba Ciiddankooda kala bixi doonin gudaha dalka Somalia.
Ambassador Yvonne Khamati ayaa hadalkaasi ka sheegtay Khudbad ay ka jeedisay Deegaanka Rongai ee Gobalka Nakuru ee dalka Kenya, waxayna xustay inaysan suurtogal ahayn in Ciiddankooda la baxaan iyadoo weli khatar lagu hayo Kenya.
Somalia, weli nabad ma aha, oo dalkeenna khatar ugu jiro weeraro. Ciiddankeena waa inay dhamaystaan Hawlgalkooda, si ay u hubiyaan inay Dowlada Somali uga tegi karaan Kontoroolka dalka’ ayey tiri Danjiraha.
Ambassador Khamati waxay sheegtay in looga baahan yahay Ciiddanka Kenya (KDF) inay ka guuleystaan Alshabaab, ka hor intaysan ku soo laabanin dalkooda hooyo, waa sida ay hadalka u dhigtay, waxayna ku sii dartay in loo baahan yahay in hubaal laga dhigo in Somalia looga soo tago Dowlad deggan oo la aqoonsan yahay (a stable recognised government).
Hadalka Ambassador Yvonne Khamati ayaa yimid, xilli ay Mucaaradka Kenya codsadeen in Ciiddanka KDF laga soo saaro gudaha Somalia, si looga nabad galo weeraradda ay Dagaalamayaasha Alshabaab ka geystaan gudaha Kenya.
Dowlada Somalia ayaa iyana dhoor jeer dalbatay in Ciidamada Kenya laga saaro Kismaayo iyada oo ku doodeyso in si sharci daro ah u qaatan kheyraadka, balse u jeedka howlgalku uu yahay in alshabaab ay dalka ka xoreeyaan.